Alshabaab: Ma jiro weerar Uganda naga fashilisay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
A warsame 16 September 2014 17 September 2014
Mareeg.com: Xarakada Alshabaab ayaa beenisay warar labadii maalmood ee lasoo dhaafay kazoo baxay laamaha amaanka iyo warfaafinta dalka Uganda, kuwaasoo lagu sheegay in howlgal caasimadda dalkaas ka bilowday sabtidii lasoo dhaafay lagu fashiliyey weerarro qaraxyo ah oo Alshabaab doonayeen iney halkaas ka fuliyaan.
War-saxaafadeed uu ku saxiixnaa Afhayeenka Alshabaab, Sheekh Cali Maxamuud Raage ayaa lagu beeniyey wararkii kazoo baxay dowladda Uganda ee ahaa iney qabteen xubno ka tirsan Alshabaab iyo walxaha qarxa.
“Maalmahan waxaan warbaahinta ka maqlaynayay warar dacaayaad ah oo ay faafinaysay dowladda Nasaarada Uganda oo ku aadanaa in ay fashilisay weerar ay mujaahidiintu qorsheeyeen oo gudaha Uganda ka dhici lahaa, wararkaasi waa been aan raad laheyn haba yaraatee majiraan weerar ay mujaahidiintu qorsheeyeen oo Uganda fashilisay” ayaa lagu yiri warka kasoo Alshabaab.
Xarakada Al Shabaab ayaa sheegtay in danta laga leeyahay sheegashada Uganda ah ee ah iney gacanta ku dhigtay Soomaali iyaga lala xiriirinayo ay tahay in lagu duugo fashilka ciidanka AMISOM kasoo wajahay Soomaaliya, sida warka loo dhigay.
“Museveni markii ciidankiisu ku jabeen duullaanka Soomaaliya oo shacabka Soomaaliyeed ogaadeen damban daabyadooda ayay bilaabeen in ay dadkooda ku mashquuliyaan dacaayad aan jirin oo ah in ay fashiliyeen weerar mujaahidiintu qaadi rabeen, haddii mujaahidiintu qorsheeyaan weerar way fulinayaan insha’allaah, suurtagalna ma ahan in hay’adahooda ammaanka ay ka hortagaan camaliyaadka mujaahidiinta” ayey Alshabaab hadlkooda sii raaciyeen.
Sidoo kale, Alshabaab ayaa sheegay in qabqabashada Soomaalida ku nool Kampala ay Uganda ku duugeyso Fadeexaddii Kufsiga ee ay dhawaan baahisay hay’adda u doodad Xuquuqda Aadanaha ee Humanr Rights Watch.
Alshabaab ayaa ku adkeysanaya in dadkii Soomaalida ahaa ee todobaadkan lagu qabtay caasimadda Uganda ee Kapala uusan ku jirin ruuxu Shabaab ah.
“Dadka ay booliska gaaladu ku qabteen magaalada Kampala kama tirsana Mujaahidiinta waa dad la doonayo in hantidooda la banaysto laguna duug duugo kufsigii iyo xadgudubyadii ciidanka gaalada Uganda ugeysteen haweenka Muslimaadka Soomaaliyeed” ayay sidoo kale ALshabaab sheegeen.
Ciidamada booliska Ugnad oo sabtidii tegay magaalada caasimadda ah ee Kampala ka bilaabay howlgal amaan sheegay iney gacanta ku dhigeen ilaa 19 Soomaali iyo walxaha qarxa.
Fred Enanga oo ah afhayeenka booliska Uganda ayaa wakaalada wararka Reutres u sheegay in weerarka Alshabaab la fashiliyey xilligii ugu dambeeyey “Weerarka waxaa la fashiliyey daqiiqadihii ugu dambeeyey” ayuu yiri Fred Enanga.
Taliyaha booliska Ugand, Gen. Kale Kayihura ayaa sheegay in Uganda oo kaashaneysa sirdoono ajnabi ah ay u suuragshay iney fashiliso weeraro qaraxyo ah oo Alshabaab ka geysan rabeen magaalada Kampala.
“Al-Shabaab waxey qorsheeyeen iney weeraraan magaalada Kampala iyo magaalooyin kale, hase ahaatee booliska oo ay la shaqeynayaan sirdoono walaalo ah ayaa ka hortegay weerarkaas, waxaana helnay qaraxxyadii ay ragas adeegsan rabeen” ayuu yiri Gen. Kale Kayihura.
Taliyaha ayaa xusay in boolisku xiray tiro dad ah oo haatan su’aalo la weydiinayo “Waxaan qabanay dhowr qof oo laga shakiyey, waxaana ku socda su’aalo weydiin” ayuu yiri Gen. Kale Kayihura oo aan bixin faahfaahin dheeraad ah.
Safaraada Mareykanku ku leeyahay dalka Uganda ayaa todobaadkii hore ka digtay weerar Alshabaab ka geystaan dalkaas, kadib markii 1-dii bishaan Mareykanku duqeyn diyaaradeed ku dilay hogaamiyihii Alshabaab Axmed Cabdi (Abuu Zubeyr).
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh oo tegay Kismaayo